VidOlink Mpitoriteny: Ny horonantsary vaovaon'ny VidOvation vaovao HDMI Ary HD | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » VidOlink Reacher: Ny HDO vaovao sy ny HD HD vaovao indrindra an'ny VidOvation
Raha misy toerana hitadiavana teknolojia avo lenta ho an'ny mpanao gazety dia misy izany VidOvation. Miaraka amin'ny firaketana folo taona monja dia nanaporofo fa orinasa mahomby sy mahomby ho an'ny indostrian'ny mpampita ny orinasam-pifandraisana, ary izany dia niainga avy amin'ny fahaizany manome ireo horonan-tsary amin'ny alàlan'ny horonantsary, audio, ary ny fampitana data, rafitra fandraisana anjara sy fizarana mamela azy ireo hanatsarana bebe kokoa ny kalitaon'ny atiny, ary ny fahafahan'ny torolàlana ho azy ireo.
Tao anatin'ny folo taona hatramin'ny nananganana azy, VidOvation dia nahomby tamin'ny maha-teknolojia lehibe sy mpanamory rafitra amin'ny fampitana horonantsary, audio, ary fampitana data, fandraisana anjara ary fizarana fitaovana ho an'ny fahitalavitra fandaharana, fanatanjahantena, famokarana, orinasam-panjakana AV, ary ny tsenan'ny governemanta. Ny orinasa dia nanolotra famokarana lavitra na any an-trano na REMI tsy misy «genlock» marina sy marika mihidy manerana ny fakantsary marobe. Ny orinasa dia miantoka ny fanarahana ara-dalàna amin'ny orinasa mivantana an'ny mpampiasa IPTV ary ny rafitra fanaovana sonia nomerika miaraka amina Veramatrix DRM efa nankatoavin'ny indostria nankatoavina.
VidOvation mitambatra fehezam-pifanarahana finday, horonantsary tsy misy finday, streaming an-tsarimihetsika, horonan-tsary amin'ny IP, fanodinana, fizahan-toetra IP, fanaraha-maso & multiviewer, orinasa IPTV, Verimatrix & Pro: Fitantanana ny zon'ny digital nomerika (DRM) & encryption, signage nomerika ary ireo rafi-pifandraisana serasera. Ny vahaolana ataon'ny orinasa dia manatsara ny fandefasana horonantsary amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo tsy mitovitoviana toy ny fatiantoka mari-pahaizana, ny fahamailinana, ny fitsabahana, ny tabataba ary ny olana momba ny fiarovana.
VidOvation ny Ny serivisy momba ny mpanjifa stellar dia mahavita manampy ny mpanjifany hampiditra ny vahaolana ho an'ny fotodrafitrasa efa misy. Ny orinasa dia mampihatra ny fahaiza-manao voaporofo hatramin'ny fotoam-piantohana feno - avy amin'ny consulting tetikasa ary ny fitantanana hatramin'ny injeniera sy ny famolavolana, hanome antoka sy fanohanana. Marobe VidOvation ny marika ny:
Ireo marika ireo sy ny maro hafa dia mandrafitra fahombiazana VidOvation dia nanao ho azy, miaraka amin'ny tsipika vita amin'ny vokatra vita, izay anisan'izany ny Broadcast-grade vaovao indrindra HDMI ary HD, ny VidOlink Reacher.
Raha ny fandefasana haino aman-jery farany an'ny orinasa HDMI ary HD Rohy fampitana sary an-tserasera SDI, ny VidOlink Reacher afaka mahatratra 3000 tongotra tsipika fahitana tsy misy latency ary tsy misy fahataperana. Ny transmitter dia tena marefo sy maivana, izay miantoka fanamiana miavaka. Ary izany no mahatonga ny unit ho tonga lafatra ho an'ny fanampiana lahatsary sy ny fanaraha-maso efa-mihetsika, ny vaovao sy ny fanatanjahantena, UAV, ny miaramila, ny orinasa ary ny fampiharana hafa izay ny rafitra an-tariby tsy dia mifanalavitra na lafo loatra.
The VidOlink Reacher manohana fanapahan-kevitra hatramin'ny 1080p60 ary mampiasa ny teknolojia fandefasana horonantsary tsy misy dikany indrindra. Io dia mamela ny rafi-pitantanan'ny famoahana 3G SDI sy HDMI famoahana horonantsary famaritana avo dia avoaka tsy misy fahatapahan-kevitra ary tsy misy latency. Ny mpitoriteny dia manana mpisafidy matetika amin'ny mpindrana sy mpandray, ary izany dia manome izany ho an'ny mpampiasa azy amin'ny fantson'ny onjam-peo 10 haingam-pandeha, izay manohana hatramin'ny 4 seta miasa miaraka. Ny rafitra dia ahitana tendrombohitra 1 / 4-20 tripod ho an'ny mpandefa sy mpandray.
Fampahalalana fanampiny an'ny VidOlink Reacher ahitana:
Safidy fisafidianana Transmitter (vita amin'ny alàlan'ny mpampitohy an'i Lemo Female 4 pin. Sony Ny vata famatsiana mifanaraka amin'ny bateria koa misy)
Safidy herinaratra mpahazo (vita amin'ny alàlan'ny mpamatsy Lemo Vehivavy 4 marika. Ampidirina ny famatsiana herinaratra AC, miaraka amin'ny safidy bateria azo antoka toa an'i V-Lock, Anton Bauer Gold Mount na Sony bateria mifanaraka F950)
Kitapom-bolan'ny Gain Antony ho an'ny mpandray (ahitana singa enina, fahazoana avo, fisavana antena amin'ny rindrina antonony misy efamira miorim-bolo sy roa miendrika polisimaly vita amin'ny marindrano)
Mianara bebe kokoa momba ny VidOlink Reacher amin'ny fitsidihana vidovation.com/product/vidolink-reacher-1500-feet-zero-latency-hd-sdi-hdmi-wireless-rohy-AB.
VidOvation Mihetsika Mandrakizay
VidOvation mahatakatra fa orinasa marobe tsy manana ny fahalalana na ny loharanom-batana hamolavola sy fametrahana rafitra feno mifanaraka amin'ny filàna teknika sy ara-bola. Ny fananana izany fahalalana izany dia mamela ny orinasa hanampy ireo mpanjifa amin'ny fampidirana an-tsakany sy an-davany ny vahaolana efa tafiditra ao anaty rafitra efa misy sy ny rafitra fahatelo.
VidOvation ny ny manam-pahaizana momba ny injeniera dia mirakitra lafiny rehetra amin'ny horonantsary audio sy fifindrana data ary mizara. Ny orinasa sy ny mpiasa tsy ampoizina dia nanoratra e-book maro sy toro-hevitra momba ny mpampiasa momba ny lohahevitra miainga amin'ny fifandraisana an-tariby tsy misy alàlan'ny fifandraisana, IPTV, horonan-tsary amin'ny tamba-jotra IP sy Ethernet an-tariby, fandefasana horonantsary, fampielezana tranonkala ary maro hafa. VidOvation ny Ny fahaiza-manao koa dia mamaha ireo fangatahana izay ahitàna ny famolavolana rafitra fakan-tsary tsy misy tanjona ahafahana misambotra sy handrakitra horonan-tsary mivantana ny tsipika tanjona hanendrena sy fanamarinana famerenana avy hatrany ho an'ny NHL sy Rosiana Hockey Rosiana. Ho fanampin'izany, hafa VidOvation Ny tetikasa dia tafiditra amin'ny fanomezana ny Centre City Las Vegas amin'ny fametrahana haitraitra lehibe indrindra maneran-tany amin'ny famoahana horonantsary avo lenta amin'ny alàlan'ny vahaolana hatramin'ny 1080p amin'ny alàlan'ny fotodrafitrasa fibre optika. Na manao ahoana na manao ahoana lehibe na kely ny tetik'asa, VidOvation ny Ny fahaizan'ny injeniera dia tsy mitovitovy amin'ny indostria noho ny kalitaon'ny asa sy ny sainy amin'ny antsipirihany, izay zavatra hitan'ny matihanina amin'ny indostrian'ny fahitalavitra hatrany satria manohy manatsara sy manitatra ny fahaizany mizara votoaty amin'ireo endrika famokarana marobe izy ireo.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny VidOvation, tsidiho vidovation.com/
Audio fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa mandefa fahitalavitra mandefa horonantsarimihetsika tsy miankina HDMI sy HD SDI ireo fahitalavitra rafitra fandraisana anjara sy fizarana fifindrana data rafi-pifandraisana nomerika famokarana lavitra-an-trano SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows TV Technology Veramatrix DRM sy ny encryption Video Video injeniera lahatsary mivantana VidOlink Reacher VidOvation 2020-04-30
Next: Hitachi Kokusai manolotra sary fakantsary vaovao 8K vaovao